Unofanira havafudzi trolls | Apg29
Unofanira havafudzi trolls
Trolls vanoda kudzivirira vanhu kubva rurege Naizvozvo saka usingafaniri zvokudya vaponeswe.
Saka pane zvakarongwa shure maitiro avo. Naizvozvo andinoita kumbobvira mashoko vanhu Ndinofungidzira ndiye mashiripiti. Ndinoapa saka hapana zvokudya.
Chii chinonzi "mashiripiti"?
A troll paIndaneti munhu chete anoda kuparadza uye kurukurai akaputsika zvinhu zviri mhinduro. Haugoni kudavira kuti vanhu vane zvinangwa izvozvo.
Pandakatanga ari Blog Apg29 saka vakaedza vamwe vaKristu sei trolls izvi, asi pashure penguva yakati havana. Ichi goblin chinangwa, kutora vanhu vake nguva uye musaneta akavabvisa zvokuti vanoguma kurega.
Trolls iri nguva mbavha, vanoda kutyisidzira uye isu vanyarare. Saka pane zvakarongwa shure maitiro avo. Naizvozvo andinoita kumbobvira mashoko vanhu Ndinofungidzira ndiye mashiripiti. Ndinoapa saka hapana zvokudya.
Ichi goblin chinangwa, kutora vanhu vake nguva uye musaneta akavabvisa zvokuti vanoguma kurega.
Kazhinji kupikisana munhu ane troll maitiro nokuti chinangwa hachisi rokusika vabvumirana pasina kushungurudzwa munhu troll nharo pamusoro.
Kazhinji I deletar akadai kana ini kuziva kuti havana mhinduro vanofanira kudya vamwe kuitira kuti nhaurirano achaita kubhururuka. Pane dzimwe nguva, ini asunungurwa kuburikidza akadai kuona apo nemakwati akati, uye njanji Chokwadi, nguva dzose kunze.
A troll mienzaniso
Mumwe muenzaniso wakadaro mamwe mashoko kuti nyaya inoti "Tarirai, ndava kuita chinhu chitsva" kuti Ndakanyorera nokuda New Year. Ndirege mashoko deletat yokutanga zvakananga asi vakasarudza kusaita kudaro. Uye saizvozvo zvakangonyuka itsika pakupa trolls mafuta.
Comments derailed uye aibira nyaya yacho kuitira kuti kwete shoko yasvika. Ichi goblin chinangwa, kuti aparadze nyaya mashoko pamwe yakawanda maturo mashoko. I kurega mhinduro amire kuratidza sei anopenga seizvi anogona kuva kana ukasadzivisa "mu chipande" zvakananga. Usingafaniri zvokudya trolls.
Muenzaniso vataure kuti nyaya hakusi Anotyisa sezvo dzimwe nguva kunogona kuva. Asi ini achakupai muenzaniso: Ndine email kubva munhu anozviti muKristu uye sezvo nokuzvikudza akaridza kumusoro zivo yake huru yeBhaibheri. Chaizvoizvo saka munhu uyu akanyora:
"Handina kugamuchira mugwaronhau kubva APG29 pamakore. Ishe Mwari waIsraeri ngaakupe kuparadza Småland uye zvose sokuti vaKristu madhimoni ikoko."
Chokwadi, handina kupindura tsamba sezvo hakubatsiri chose. Ndainge ipapo akasimuka kunyanya e-mail uye saka ndakarasikirwa nguva uye kushanda munhu haana pfungwa kuchinja.
Ndakadzidza pakutanga Blogging yangu kuti ndingadai kutora nguva yangu na uye mashoko akadaro. Unofanira havafudzi trolls! Asi, unofanira kusiya chinhu mhando ichi kuitira kuti trolls pakupedzisira inosvika vachiziya kuitira kuti vanoziva kuti vanofanira kutendeuka kuna Jesu Kristu uye vaponeswe!
Chinangwa Apg29 ndiko kupa vhangeri raJesu Kristu kuti vanhu kuitira kuti vachakwanisa kuti vamugamuchire uye vagoponeswa. Hapana chinogona kumisa izvi. Trolls vanoda kudzivirira vanhu kubva rurege Naizvozvo saka usingafaniri zvokudya vaponeswe.
Uyewo handina kupindura na kana netsinhiro vanhu vane akaoma nyaya. Havasi kutsvaka mhinduro nekuti vane mibvunzo yokutendeseka, asi chete kuda kubvunza. Kupindura na zvakadaro kana mhinduro, ukangogamuchira kuwana zvakanaka mumwe nemibvunzo, uye ipapo mumwe uye ipapo mumwe ... Regai zvokudya trolls!
9 Zviratidzo kuti akasangana pamusoro paIndaneti troll